Asha I Aden - Taariikhda Qoraaga - VOA
Produced by Asha I Aden
Xaliimo Maxamed Axmed (Gobaad) oo ah gabar Soomaali ah oo deggan Sweden ayaa sameysay App lagu dhageysto buugaagta ku qoran Soomaaliya, kaas oo lagu magacaabo Kitabcluod, wuxaana usuurtogalinayaa in dad badan, gaar ahaan carruurta ay buugaagta ku si fudud uga dhageystaan online-ka.
100 qof oo lagu dilay gobolka Darfur ee dalka Suudaan
Dagaallo ka dhacay gobolka Darfur ee dalka Suudaan oo u dhexeeyay kooxo Carab ah iyo kuwo aan Carab ahayn ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof, taas oo sii kordhinysa tirada dhimashada ee boqolaal qof oo gobolkaas ka dhacay bilihii lasoo dhaafay.
Xidhiidh maka dhexeeyaa xaalufinta deegaanka iyo abaaraha soo noqnoqda?
Bishan June 5-teeda, waxaa sannad walba maanta oo kale dunida laga xusaa maalinta deegaanka dunida, si loo dhiirigeliyo talaabooyinka loo qaado dhinaca ilaalinta bey’adda iyo deegaanka. Xuska maalinta deegaanka ayaa la soo bilaabay sannadkii 1974-kii, iyada oo laga xuso in ka badan 100 waddan.
Mudaharaado xooggan oo looga soo horjeedo militariga Sudan oo dalkaas ka socda
Mudaaharaadyo rabshado wata ayaa ka socda Sudaan tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore. Ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa dilay hal qof maalintii Sabtida intii ay socdeen mudaaharaadyada soo cusboonaaday oo looga soo horjeeday militariga oo la wareegay talada dalka kaasoo ka dhacay Omdurman.
Haweenka iyo Qoyska: Saameynta dagaalka Ukraine ku Yeeshay Qoysaska Somalida ee Dalkaasi dagganaa
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxaan idinku haynaa sheekooyinka Soomalida ka qaxday dagaalka dalka Ukraine ee gaaray dalka Poland qaarkood.
Qoyska: Haweenka Gobolka W. Bari oo ku Soo Badanaya Siyaasadda
Barnaamijka Haweenka iyo Arrimaha Qoyska ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah Khadra Iimaan Sigad oo ka tirsan baarlamaan goboleedka Garrissa County.
Haweenka Iyo Qoyska: COVID 19 iyo Saameyntiisa Gabdhaha ku Ganacsada Xaafadda Islii
Barnaamijka Haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan (May 20, 2020) waxa uu ku saabsan yahay saameynta uu gabdhaha ganacsiyada yar yar ku leh xaafadda islii ku yeeshay bandowga saaran magaalada Nairobi ee ujeedadiisu tahay in lagu xakameeyo xanuunka COVID 19
Fartuumo Kuusow: Qoraa iyo Macallimad Luuqadda Ingiriiska ah.
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Fartuumo Maxamed Kuusow oo ah macalimad wax ka dhigta dugsiyada sare ee dowladda ee magaalada Winsor ee gobolka Onterio ee dalka Canada. Fartuun waxa ay 18-kii sano ee la soo dhaafay dhigeysay maadada ingiriiska.
Faaqidaada Todobaadka: Soo Laba-kacleynta Burcadbadeeda.
Barnaamijka Faaqidaada Todobaadka, oo ay soo diyaarisay soona jeedineysa Casha Ibrahim Aden "Cuud" wuxuuna ku saabsanyahay soo rogaalcelinta burcad badeeda Soomaalida.
Caweyska: Abwaan Cali-Goox
Faaqidaadda: Halkee Ayey Soomaalidu Hiigsan Kartaa 2015-ka
Barnaamijkan Faaqidaadda Toddobaadka ayaa waxa uu ku saabsan yahay falanqeyn ku saabsan waxa dadka Soomaaliyeed, shicib iyo dowladba, ay qabsan karaan sanadkan hadda billowday ee 2015-ka.